Ekpere iji dọta nwoke. ? Ngwa na n'uche.
Ekpere iji dọta nwoke Enwere ike ịkatọ ya nke ukwuu mana ọ dị oke arụmọrụ ma dị ike.
Ọ bụ ekpere a na-ebughi n’obi ka ọ bụrụ naanị ụmụ nwanyị na-ekpe, ọ bụ ezie na ndị a bụ ndị na-eji ngwa ọgụ a alụ ọgụ maka mmekọrịta ịhụnanya ahụ chọrọ enyemaka Chineke.
Okwesiri iburu n’uche na odighi nkpa ka mmekorita a ga-adaba n’iru ya ime ekpere a mana enwere ike ime ya site na akara mbu bu na ihe adighi adi nma.
1 Ekpere iji dọta nwoke na-ebu ọnụ
2 Ekpere ka iba n’ime mmadu na uche
3 Ekpere nke inwe obi nkoropu mmadu na sekọnd
3.1 Gịnị ka ekpere a bụ maka ya?
3.2 Enwere m ike ikpe ekpere niile?
Ekpere iji dọta nwoke na-ebu ọnụ
«Mmụọ Nsọ, gị onye karịa onye ọ bụla maara ike nke mkpụrụ obi m ...
A na m arịọ gị ka ị soro mee ihe m rịọrọ, na site n'ike gị ị mee ka m bịaruo nso (aha onye m hụrụ n'anya), na onye ahụ ga-enwe mmetụta ọma m niile wee daa n'ihu ha, a na m arịọ gị, Chineke dị nsọ ka ịgbagọ uche ya na ka ọchịchọ ya bụrụ nọnyeere m
Lelee m ma nwee obi m niile na m hụrụ ya n'anya.
Hụrụ n'anya Mmụọ Nsọ, onye na-achị mkpụrụ obi, a na m arịọ gị ka ị bịakwute m, a na m arịọ gị maka ezigbo enyemaka gị ịza ekpere m ...
Ana m arịọ gị na ịhụnanya ya enweghịzị mmasị na m, na ọ naghị ezere m, na ọ dị njikere mgbe niile ịgwa m okwu, na ike na-agba izu naanị maka ihu ọma m ...
A na m arịọ gị, ka nwoke ahụ hụrụ gị n'anya bịakwute m, ka ike anyị bụrụkwa naanị otu, ka ike gị bụrụ onye sonyere m na nwoke ahụ m hụrụ n'anya nke ukwuu.
Maka mgbapụta sitere n'aka Chineke nke Mmụọ Nsọ Eluigwe m hụrụ n'anya, nye m ume dị mkpa ka onye ahụ hụ m n'anya, ị maara mkpụrụ obi anyị ma taa bụ oge gị ga-eji chịkọta ha ọnụ ...
Eji m obi m kwere gị nkwa ịhụ ya n’anya, nke ahụ (hụrụ n'anya) ọ ga-enwe obi ụtọ mgbe niile na m, na obi agaghị ezu ma ọ bụ mwute n’obi ya ma ọ bụrụ na ọ dabere na m.
Taa mmụọ nsọ ana m arịọ gị nke ukwuu maka ịhụnanya na mkpakọrịta gị. Amen "
Ọchịchọ anyị ga - enwerịrị ike ime nke na - eduga anyị ịrịọ jụọ maka ihe na - ere dị ka ire ọkụ dị n'ime anyị.
Onye Nwoke a laghachite ososo Ọ na - eme ka anyị jide n’aka na a ga - anapụta obi nwoke ahụ ngwa ngwa n’ihi na anyị enyebeghị oge maka mmerụ nke onye ọ bụla nwere ike igbochi ma ọ bụ gbochie nzube anyị chọrọ.
Ọ bụghị whim ma ọ bụ ọchịchọ a mụrụ site na nganga kama ọ bụ maka ịnapụta ụlọ, ezinụlọ, mmekọrịta nke nọ n'ihe egwu nke ibibi ruo mgbe ebighị ebi.
Ọ bụrụ na otu onye n'ime mmadụ abụọ ahụ ka chọrọ ka mmekọrịta a dịgide, ọ ga-ekwe omume ihe niile.
Ekpere ka iba n’ime mmadu na uche
«Oge ịhụnanya na -abịakwasị anyị.
Obi na-eteta ọzọ, a na m ewere ọnọdụ m dị ka ihe dị ndụ ma na-akwado onwe m, ikike ebumpụta ụwa m ịhụ n'anya na ibi na nnabata nke ịhụnanya.
Enwere m nsogbu na ịhụnanya n'oge gara aga.
Emechu m ihu.
Obi m emebiela. Ozugbo m nọrọ naanị m, iwe, enweghị m obi mgbawa, nwee mwute na obi erughị ala.
Ekwere m na ọ gaghị ekwe omume ịchọta ezi ịhụnanya, nke na-adịgide adịgide ma na-emetụ n’obi.
Mana m họrọ ịgwọ nke a ugbu a.
Ahọrọ m ịhụnanya ma họrọ ịchọta ezi ịhụnanya m.
Ana m eme nhọrọ ọhụrụ iji nwetaghachi ịdị ọcha nke obi m wee jikọta ịhụnanya miri emi na -akpali akpali. "
N'oge ndị a ebe anyị nwere obi abụọ ọfụma ma ọ bụ ebee anyị na nwoke ahụ enweghị anụ ahụ ọ bụla Anyị nwere ike ikpe ekpere a siri ike ka ọ bụrụ site na njikọta nke uche ma ọ bụ nke mmụọ na mmetụta ịhụnanya na-amalite na-eto.
Ọ nwere ike na-arụ ọrụ na mmekọrịta ndị ahụ n'ebe dị anya, na-eburu n'uche nwoke ahụ na-eche banyere anyị mgbe niile nwere ike inyere anyị aka nke ukwuu ma nwee ike ime ka ọ daba n'ịhụnanya.
Ekpere nke inwe obi nkoropu mmadu na sekọnd
«Mmụọ na -enweghị mgbagha, a na m arịọ gị taa ka o nyere m aka, obi nkoropụ ghọrọ mmụọ, taa a na m akpọku gị, mmụọ Don Juan da Conquista bịa nyere m aka, mmụọ nke ịhụnanya, bịakwute m, mmụọ nke Saint John onye na -egwuputa ihe, gbaa ọsọ nyere m aka, mmụọ dị ike nke ifufe anọ, ụzọ na ebe.
Mmụọ dị ike na nke Saint Mark nke Leon, mmụọ nsọ dị oke egwu ma na-ewe iwe nke mmụọ nsọ, Saint dị nsọ nke Saint Helena Site na Jerusalem.
Mụọ Nsọ nke Onye Nzọpụta nke Horta, Mụọ nke Mary Isi, mmụọ nke Onye nzọpụta nke Horta, mmụọ jupụtara na ịdị mma na obi oma, taa a na m arịọ maka enyemaka gị, ana m akpọku gị ma nye gị iwu ka ị nyere m aka.
Nna-ukwu nke uche ise ahụ, echiche nke ikpé, uche na mmụọ ibi, taa, m na-abịa ịrịọ gị, ka nyere m aka imezi: (aha onye ahu) A na m ajụ ndị senti nke ụbọchị a.
A nam ariri uka omuma nke amuru onye a na ubochi izu uka nke amuru m.
Mmụọ ozi nke n guardianche nche, bụ mọ-ozi nke onye n guardianche nche.
Ekweela m kandụl a nke na n'uche ya na ọ dịghị ihe ọ bụla nke na-adịghị etinye aka m n'ahụ ya, na ahụ ya chọrọ m, na onye otu ya na-enwe mmekọahụ na-eme m obi ụtọ, na isi ya na-eche naanị maka m, na naanị aka ya chọrọ imetụ ahụ m aka, na justkwụ chọrọ ka m jee ije na m, na echiche gị, ikpe na uche gị, ga-abụ naanị maka m.
Nye m mmụọ mmụọ iji mara uche ya, na (aha onye ahụ) naanị na-eche maka m, chọọ m ma chọọ naanị ya, ma ọ bụ na ndị nsọ, m na-arịọ ya ka o nyere m aka ma nye m ịhụnanya ya n'ihi na m kwesịrị ya. ”
Nke a bụ ekpere a ga-enwerịrị ịrụ ọrụ nke ọma ma mara na ọ bụ okwu mmetụ ahụ anyị ga-ajụ.
Nwa nwoke na-achọsi ike iji nweta ya na sekọnd ole na ole chọrọ ka anyị tinye ike anyị niile n'ihe anyị na-arịọ, na nke kachasị, na anyị ga-arịọ maka ịmara na anyị nwere ike inweta naanị site na -ekpe ekpere.
Okwukwe siri ike, n'ihi na ọ dabere na arụmọrụ nke a na ekpere niile na anyị nwere ike ime n’agbanyeghi ihe anyị na-arịọ.
Na-ekpe ekpere ka obi nkoropụ nke mmadụ na sekọnd ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ ma dị ike nke ukwuu.
Ọ bụghị banyere anwansi ma ọ bụ ọbụbụ ọnụ ọ bụla metụtara, anyị achọghịkwa ịchịkwa akọ na uche onye ọzọ mgbe anyị dị mma, ihe anyị na-arịọ bụ na nwoke a nwere ike ịhụ àgwà niile anyị nwere ma bụrụ onye nzuzu maka ịnọnyere anyị.
Ekpere a na ndi ozo niile n’eme otutu ihe, otu n’ime uwa nile bụ ime ka okwukwe anyị dịgide.
N'okwu a akọwapụtara, anyị nwere ike ịrịọ ụfọdụ arịrịọ pụrụ iche.
Ọ dị mkpa iburu n’uche na anyị nwere ike ikpegara ndị nọ mpụ ozi ekpere a dịka ụwa ma ọ bụ ụfọdụ Chukwu mana anyị nwekwara ike ime ya onwe anyị, maka n’ime obi anyị.
Ihe dị mkpa bụ ịnweta njikọ pụrụ iche na ụwa nke ime mmuo nke bu ebe agha di ezigbo agha.
Anyị nwere ike ịrịọ maka mmekọrịta ịhụnanya anyị, maka nwoke ahụ gbakụtara anyị na onye na-achọghị ịlaghachi, anyị nwere ike ịrịọ ka echigharịa ịhụnanya n'obi ya wee chọọ ịlaghachi n'ụlọ ahụ ọ hapụrụ.
Ee, ekpere niile anyị chọrọ ka anyị nwee ume dị mma ma hichaa ọnọdụ ime mmụọ nke na-agagharị anyị.
Nke a bụ uru anyị ga - ebido ịnụ ụtọ anyị oge anyị malitere ikpe ekpere.
A na-atụ aro ikpe ekpere kwa ụbọchị ma na-eme ya site na omimi nke mkpụrụ obi, na-eso ekpere pụrụ iche ma ọ bụ na-eji okwu nke anyị na nnukwu okwukwe.
Nwee okwukwe n’ekpere iji dọta ịhụnanya nke mmadụ.